सडकमा एजेण्डाविहीन विरोधका चर्का नारा, प्रदर्शनको होडबाजी (भिडियोसहित) | ईमाउण्टेन समाचार
सडकमा एजेण्डाविहीन विरोधका चर्का नारा, प्रदर्शनको होडबाजी (भिडियोसहित)
माघ २०, २०७७ पढ्न ६ मिनेट
देशभर अझैपनि कोरोनाको त्रास कायमै छ । देशमा राजनीतिक अस्थिरता दिनहँु जस्तै बढ्दै गएको छ । सडकमा विरोधका आवाज व्यापक रुपमा उठिरहेका छन् । एकले अर्कालाई कटाक्ष गर्नेक्रम निरन्तर जस्तो छ । सडकमा जनता ओराल्ने क्रम जारी छ । तर विरोध र नारा के का लागि ? बेरोजगार युवाका लागि रोजगारी दिनका लागि ? कोरोनाको महामारीमा विदेशमा अलपत्र परेका आफना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनका लागि ? गरिव असहाय, वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाको अधिकारको लागि ?
यी माथि उल्लेख भएका कुनै पनि विरोध गर्दै नारा लगाउदै सडकमा उर्लिने नेताहरुको एजेण्डा भएको देखिँदैन । विरोध छ त केवल आफ्नो निहित स्वार्थका लागि । एउटा व्यक्तिको निहित स्वार्थका लागि हजारौं जनतालाई अनाहकमा सडकमा ओराल्ने होडवाजी भैरहेको छ । एकअर्थमा भन्ने हो भने राजनीतिक दलको सम्पति भनेको कार्यकर्ता नै हो । दल समृद्ध बनाउन कार्यकर्ता अनिवार्य शर्त हो ।
जुन अपरिहार्य पनि छ । तर कार्यकर्ता संरक्षण भन्नासाथ आर्थिक र राजनीतिक संरक्षण भन्ने बुझिन्छ । राजनीतिक संरक्षण भन्नाले कुन स्तरको राजनीतिक कार्यकर्ता निमार्ण हुँदैछ ? त्यसले नै राजनीतिक स्थिरता र विकस निमार्णका कुराहरु पहिल्याउन सकोस् र देशले विकासको गति लिन सकोस् । कार्यकर्ता भनेको आर्थिक रुपमा नभइ बैचारीक र नैतिक हुनुपर्छ ।
तर दुर्भाग्य नेपालका नेता तथा कार्यकर्ता पद र कुर्सी जता पाइन्छ, त्यतै हो मा हो मिलाउने मात्र छन्, जसले गर्दा देशले स्थीरताको बाटो समाउन सकेको छैन । राजनीति भनेको समाज निर्माणको प्रकृया पनि हो । राजनीतिले सामाजिक व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्ने हो । राजनीतिले सामाजीक व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्ने हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पश्चात नेपालको राजनीति निकै अस्थिर बनेको छ ।
संवैधानिक निकाय, नागरिक समाजका अगुवा, नेता तथा कार्यकर्ता तथा भातृसंगठनहरु सबैको ध्यान त्यतै छ । शीर्षस्त नेतृत्व एक अर्काेको आरोप प्रत्यारोप गर्न र सडकमा कार्यकर्ता लिएर नारा जुलुस गर्न व्यस्त छन् । अर्काेतर्फ काम गरिरहेका जनतालाई आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिको लागि सडकमा लिएर भाषण सुनाइरहेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ’ भनेर आफूलाई नागरिक समाजको अगुवा भन्दै सडकमा उफ्रिनेहरुलाई प्रत्येक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्ना नागरिकको शव आएको थाहा हुनु पर्ने कि नपर्ने ? नेताको छत्रछायाँमा माइतीघर मण्डलामा उफ्रिने कार्यकर्ताहरुलाई देशमा बेरोजगारीको समस्या दिनानुदिन बढेको प्रति ध्यान हुनु पर्ने कि नपर्ने ? सधैंभरी नेताको पछि लागेर भाषण सुनेर हो मा हो मिलाएर देशको विकास कहिले हुने ? जबसम्म जनता, नेता तथा कार्यकर्तामा यी र यस्ता कुराहरुप्रति ध्यान जान सक्दैन, तबसम्म राजनीतिक स्थिरता र देश विकास हुँदैन ।
नेकपाको घर झगडा, कम्युनिष्ट राजनीतिको हुर्मत लिने अवस्थामा (भिडियोसहित)
सरकारले भारतसँग वार्ता नगरेकोप्रति मुख्य ठूला दल मौन
सीको स्वागतका लागि निजामती कर्मचारीदेखि खेलाडीसम्म
सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको भन्दै प्रमुख बिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस सडकमा